Maitiro Ekubvisa Apt Cache uye Kudzosera Precious Disk Space
Unojekesa sei apt apt? Iwe ingoshandisa izvi zvakakodzera-kuwana mutemo chisarudzo:
Asi pane zvakawanda pakuchenesa apt cache pane kungomhanya pamusoro apa rairo.
Mune ino dzidziso, ini ndichatsanangura chiri apt cache, nei ichishandiswa, nei iwe ungade kuichenesa uye ndezvipi zvimwe zvinhu zvaunofanira kuziva nezve kuchenesa apt cache.
Ndiri kuzoshandisa Ubuntu pano pakureva asi sezvo izvi zviri zvekuda, zvinoshanda kune Debian uye kumwe kugoverwa kweDebian neUbuntu senge Linux Mint, Deepin uye zvimwe.
Chii chinonzi apt cache? Nei ichishandiswa?
Paunoisa package uchishandisa apt-tora kana murayiro wakakodzera (kana mapakeji eDEB mune software yepakati), iyo apt maneja wepakeji kurodha pasi pasuru uye kutsamira kwayo mu .deb fomati uye nekuichengeta mu / var / cache / apt / archives folda.
Ndichiri kurodha pasi, apt inochengetedza iyo dhata package mu / var / cache / apt / archives / chidimbu dhairekitori. Kana dhagi iri kurodha pasi zvachose, rinoburitsirwa kunze / var / cache / apt / dura dhairekitori.
Kamwe iyo madhiri mafaira epakeji uye kutsamira kwayo kwadzingwa, yako system inoisa pasuru kubva kune aya mafaera mafaira.
Iye zvino unoona iko kushandiswa kwe cache? Sisitimu inoda nzvimbo yekuchengeta mafaera epake kumwe kunhu usati waaisa. Kana iwe uchiziva iyo Linux dhairekitori dhizaini, iwe waizonzwisisa kuti / var / cache ndiyo yakakodzera pano.
Nei uchifanira kuchengeta cache mushure mekuisa iyo package?
Iwo akarodha pasi mafaera emadhiza haana kubviswa mudhairekitori ipapo mushure mekumisikidza kwekupedzisa. Kana iwe ukabvisa pasuru uye woidzosera, system yako ichatsvaga iyo package mune cache uye kuitora kubva pano pane kurodha pasi zvakare (chero bedzi iyo package package mune cache yakafanana neshanduro iri kure repository).
Izvi zvinokurumidza zvikuru. Unogona kuyedza izvi uri wega uye uone kuti chirongwa chinotora nguva yakareba sei kuti chiiswe kekutanga, chibvise uye chiise zvekare. Unogona shandisa iyo nguva kuraira kuti uone kuti zvinotora nguva yakareba sei kupedzisa rairo: nguva sudo apt kuisa package_name.
Ini handina kuwana chero kongiri pane cache yekuchengetedza mutemo saka ini handikwanise kutaura kuti yakareba sei Ubuntu inochengeta mapakeji akadhirowewa mune cache.
Iwe unofanirwa kuchenesa apt cache?
Zvinoenderana newe. Kana iwe uri kupererwa nediski nzvimbo pamudzi, iwe unogona kuchenesa apt cache uye kudzoreredza iyo diski nzvimbo. Icho chimwe cheiyo nzira dzinoverengeka dzekuburitsa diski nzvimbo paUbuntu.
Tarisa uone kuti yakawanda sei nzvimbo cache inotora ne du raira:
Dzimwe nguva izvi zvinogona kuenda muma100s eMB uye nzvimbo iyi inogona kuve yakakosha kana iwe uchimhanyisa server.
Nzira yekuchenesa apt cache?
Kana iwe uchida kujekesa apt cache, pane wakatsaurwa kuraira kuti uite izvozvo. Saka usaende nezvekudzima pamurume cache dhairekitori. Ingoshandisa murairo uyu:
Izvi zvinobvisa zvirimo mukati me / var / cache / apt / archives dhairekitori (kunze kwefaira rekukiya). Heano yakaoma kumhanya (simulation) yeiyo apt-tora yakachena raira kudzima:
Kune mumwe murairo unobata nekuchenesa apt cache:
Kusiyana nehutsanana, autoclean inongobvisa mapakeji ayo asingakwanise kurodha pasi kubva kuzvitoro.
Ngatiti iwe waisa package xyz. Mafaira ayo emadhiza anoramba ari mune cache. Kana pari zvino paine vhezheni itsva ye xyz package inowanikwa mune yekuchengetera, iyi iripo xyz package mune cache yave yechinyakare uye haina basa. Iyo autoclean sarudzo ichabvisa mapakeji akadaro asina basa asingakwanise kurodha pasi zvekare.
Zvakachengeteka here kubvisa apt cache?
Ehe. Izvo zvakachengeteka zvachose kujekesa cache yakagadzirwa neakafanira. Hazvizokanganisa mashandiro ehurongwa. Pamwe ukadzosera pasuru yacho zvinotora nguva yakati rebei kurodha pasi asi ndizvozvo.
Zvekare, shandisa apt-tora yakachena kuraira. Inokurumidza uye yakapusa pane kudzima manyorerwo echikwata.
Iwe unogona zvakare kushandisa graphical zvishandiso senge Stacer or Bleachbit nokuda kwechinangwa ichi.
Panguva yekunyora chinyorwa ichi, hapana sarudzo yakavakirwa-mukati pamwe nemutsva apt command. Nekudaro, tichichengeta kuenderana kumashure, apt yakachena inogona kumhanyiswa (iyo inofanirwa kunge ichimhanya apt-kuwana yakachena pasi payo). Ndokumbira utarise kuchinyorwa chino ku ziva mutsauko pakati peakakodzera uye apt-tora.
Ndinovimba iwe unowana iyi tsananguro nezve apt cache inonakidza. Icho hachisi chinhu chakakosha asi kuziva izvi zvidiki zvinhu zvinokuita iwe uve neruzivo nezve yako Linux system.
Ndinogamuchira mhinduro yako uye mazano mune chikamu chemashoko.
Mashandisiro Ekushandisa apt-cache Raira muDebian, Ubuntu uye Dzimwe Linux Kugoverwa
7 Nzira Dzakanaka Dzakasununguka Nzvimbo Kubuntu uye Linux Mint
Yekutanga Nongedzo Yekubata Yakasiyana Yakadzoserwa Akabatana Zvikanganiso muUbuntu